Inkululeko yeendaba | Martech Zone
NgoMvulo, nge-29 kaJanuwari, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Le veki ibinomdla ngokubhekisele kwiWebhu. Ndiyakholelwa ngokuqinileyo kubungxowankulu nakwinkululeko. Bangamacala amabini esikalini ngononophelo. Ngaphandle kwenkululeko, izityebi ziya kulawula. Ngaphandle kongxowankulu, ngekhe ube nethuba lobutyebi.
IsiHlomelo sokuQala soMgaqo-siseko: ICongress ayiyi kwenza mthetho malunga nokusekwa kwenkolo, okanye ukuthintela ukusetyenziswa kwayo ngokukhululekileyo; okanye ukuphelisa inkululeko yokuthetha, okanye yeendaba; okanye ilungelo labantu lokuhlanganisana ngoxolo, nokucela urhulumente ukuba alungise izikhalazo zabo.
Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba xa kwakubhalwa uMgaqo-siseko, i "Cinezela" yayiliqela labemi be-rag-tag ababenoomatshini bokushicilela. Babengengabo ookopolotyeni abakhulu abakhokelwa yidola yamandla onke njengoko kunjalo kule mihla. Iphephandaba "lalisoloko liliphikiso, iphepha elinye, elalimgxeka urhulumente. Elona phephandaba lidala, iHartford Courant, lade lamangalelwa nguThomas Jefferson ngelityala… kwaye woyiswa.
Isandi esiqhelekileyo? Kufuneke i. Kufana nokuba, yithi, iwebhusayithi okanye ibhlog. Le elandelayo "Cinezela" kunye neposti elula yebhlog ibonakala ijongeka ngathi amaphephandaba ethu ayenzile kwiminyaka yokuqala yelizwe lethu elikhulu. Imibutho enje IFree Frontier Foundation qinisekisa ukuba inkululeko iyaqhubeka ikhuselwa. Thatha ujongo olunye kwiwebhusayithi ye-EFF kwaye uyakufumana uninzi lwemizekelo yamashishini amakhulu azama ukukhetha umfana omncinci.
Emva kokuba imali ihambile, ibali liyatshintsha akunjalo? Ababhali be-NBC bafunyanwa bexhuma iijets kunye nabathengisi, ungqubano lomdla. Iimvumi ziyazilibala iintsuku zokuba kungabikho mntu ubuxabisayo ubugcisa bazo, kwaye babuya umva IRIAA ukulwa ukuqhubeka nokuqokelela izigidi ukuze i-Cristal iqhubeke nokuhamba kwaye ukuthengwa okulandelayo kunokuthengwa. Kwaye iiwebhusayithi kunye neenkampani ze-intanethi ezenza izigidi zilibale ukuba ziqale nge-hit enye, uguquko olunye.
Le veki ibinomdla. Ndijonge njengokuba uRobert Scoble ethatha indawo yokuma, ngamanye amaxesha omelele kancinci, ukuqinisekisa ukuba ikhredithi kwiwebhu yenziwa apho kufanelekileyo. URobert ade azivavanye kwaye avume ukubhengeza ngakumbi kwaye alibale apho aqale khona. Kuhle ukubona le nto.
Ndijonge nanjengoko iGoDaddy ingene yaza yasika omnye wabaxhasi babo ngexesha lenkampani enkulu. Alithandabuzeki elokuba GoDaddy uya kuba nayo ze kwenziwe oku kunye nomthengi omkhulu. Bawulinganisile umngcipheko, nangona kunjalo, kwaye baqonda ukuba babecofa nje ingcongconi engalweni yabo. Ingxaki yayikukuba bacofe iingcongconi ezingalunganga. Ngoku baneNoDaddy yokujongana nayo. (Ukuxelwa ngokupheleleyo: Ndenze ilogo kwindawo yeNoDaddy ngokuhlwanje.)
UGoogle ngoku iyavuma ukuba benze impazamo yokuvula ishishini eTshayina ngohlobo olucatshuliweyo lweeNjini zabo zokuKhangela. Kuhle. Ndonwabile ukuba bayayiqonda indlela ekubuyisa ngayo oku ixesha lezandla kubantu abacinezelweyo abafumana inkululeko.
Enkosi ngokulunga kweNkululeko yeendaba! Kwaye enkosi ukulunga ngeNkululeko ye-Intanethi!